Moa ve ny fampiasanao Pinterest ho an'ny finday? | Martech Zone
Alahady, Aogositra 3, 2014 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Toy ny amin'ny Internet, mailaka ary saika ny paikady rehetra - ny mpivarotra dia tsy maintsy mihevitra ny finday rehefa mamokatra, mampiseho ary mizara ny atiny ao amin'ny tranokalany, hafatra ary amin'ny alàlan'ny sehatra hafa. Sehatra iray izay misy fanatrehana finday dia ny Pinterest. Ny rindranasa finday ao amin'ny Pinterest dia efa nisintona an-tapitrisany ary mbola mitohy ho sehatra fahitana malaza. Raha ny marina dia mpitsidika 3 amin'ny 4 ao amin'ny Pinterest no eo amin'ny fitaovana finday ary ny antsasaky ny fizarana ara-tsosialy amin'ny iPad dia avy amin'ny Pinterest!
Orinasa manararaotra ny sehatra sy manatsara ny fitaovana finday mampitombo ny fahitana azy ireo. Ireo mpitsidika finday vaovao nalefan'i Pinterest ho an'ny mpivarotra dia nitombo 46%!
Hatramin'ny namoahana ny fampiharana finday Pinterest, ny fampiasana ny tambajotra sosialy amin'ny fitaovana finday dia nisondrotra raha oharina amin'ny kinova tranonkala ary mitombo hatrany. Pinterest dia iray amin'ireo mpandray anjara lehibe indrindra amin'ny fivezivezena amin'ny bilaogera sy marika ary ny ankamaroan'izany dia noho ny Pinterest finday. Ka ahoana no ahafahanao mampitombo ny mety hizarana ny tsimatrao ary tsindrio-amin'ny alàlan'ny fampiharana finday? Ity misy torolàlana iray momba ny marketing mahomby amin'ny finday Pinterest.
Ny infographic dia manome fidirana amin'ny fetran'ny toetra amam-panahy, ny tahan'ny sary, ny fampiasana fampiasa, ny rohy ary manonona tsara ny Pinterest Mobile Pin It SDK to include Kitiho ny bokotra It amin'ny sary avy amin'ny rindrambaiko findainao.
Tags: sary mihetsika gifsgifsiOSios fitarihana fitarihanafanatsarana findaydikan-findaymanatsara ny findayapetaho izy android sdkapetaho io iOSapetaho io iphoneapetaho io sdkBokotra Pin-Itfetra ny toetra amam-panahyrohy azo tsindriana pinterestfonts pinterestratios sary pinterestfinday pinterestpinterest finday SDKpinterest urlfametahana fotoana tena izy
Mitety ny fitsipi-pifehezana amin'ny fifaninanana Facebook sy sweepstakes